IOS 8.1.2 Download rohy | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka ny fanavaozana vaovao ao amin'ny iOS 8.1.2 omaly. Dika iray izay tsy mitondra na inona na inona izay tena mahaliana azy ny misintona na manavao ny fitaovantsika, saingy manana tombony lehibe izany fa mbola mifanaraka amin'ny Jailbreak, ka tsy misy olana kely akory amin'ny fanavaozana an'ity 8.1.2 vaovao ity ary hanohy hanana Cydia amin'ny fitaovantsika hahafahana mankafy, raha irintsika, izay atolotry ny magazay Jailbreak. Raha te hampidina ny firmware ianao dia tehirizo rehefa te hanavao ianao dia atolotray anao ny misintona rohy avy amin'ny lozisialy Apple.
iPod mikasika 5G
iPad Mini 3 (Sina)
iPad Air (finday)
Raha hametraka ireo firmware ireo dia tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa manana extension IPSW izy ireo (fa tsy ZIP na zavatra mitovy aminy) ary rehefa mifidy ny safidy ao amin'ny iTunes ianao dia tsy maintsy manindry "Alt + Restore / Update" raha amin'ny Mac ianao na "Ctrl + Restore / Update" raha Windows ianao. Hiseho avy eo ny varavarankely izay ahafahanao misafidy ilay rakitra alaina ary hanomboka ho azy ny fanavaozana na ny famerenana amin'ny laoniny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Rohy fampidinana IOS 8.1.2
Elfego dia hoy izy:
Amin'ny windows dia tsy ctrl izany fa ny fiovana tsy maintsy hazoninao
Valio i Elfego
IPhones roa voalohany, amidy amin'ny $ 25,000
COBI, ataovy hendry ny bisikiletanao amin'ity fitaovana ity ho an'ny iPhone